Aynu u wajihi: mararka qaar, waxaa aan ay noqon Wi-Fi kasta oo aad doorato in aad ka shaqeeyaan. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay email-deg ah ku soo dir your computer laakiin ma jiraan wax bilaash ah Wi-Fi la heli karo. Taasi waa marka aad iPhone kuu gaar ah ugu horeeya ee internet noqonaya hub si qarsoodi ah. Kulkulul Personal on iPhone kuu ogolaanaysaa inaad ku xidhmaan kombiyuutarada iyo qalabka aad u Internetka la isticmaalayo xogta gacanta. Si aad u isticmaasho habkaani, waa inaad marka hore awood ugu horeeya ee qof ahaaneed ku saabsan qorshaha xogta gacanta aad. Haddii aadan awood u qorshaha xogta gacanta, la xiriir side u hesho macluumaad iyo binta. Haddii kale marna ma waxaad isticmaali doonaa muujinta ah. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka loogu sida loo Mudanayaasha ugu horeeya.
Sida loo dhigay aad iPhone ugu horeeya ee ah
Waa dhab ahaantii si caddaalad ah u fudud in aad iPhone ugu horeeya ee ah:
Tallaabada 1. Settings Open app oo ka jaftaa on gacanta. Laga soo bilaabo halkan, hubi in Data gacantu waa dadban ay u ON. Ka dibna hoos xerooyinka Personal kulkulul.
Tallaabada 2. tuubada ugu horeeya ee qofka Slider si ay u Demi in ON. Tani waxa ay ka fir ah in xaaladda firfircoon badala.
Tallaabada 3. Waxaa lagu weydiin doonaa haddii aad rabto in ay ku xidhmaan via Bluetooth, Wi-Fi ama USB. Haddii aad qorshaynayso in ay ku xidhmaan aaladaha kala duwan, tani waa fursad aad rabto in ay doortaan, laakiin line hoose waa, haddii aadan hubin waxa ay fursad u tahay in ay doortaan, waa in aad xulan Wi-Fi oo USB oo keliya. Dabcan, aad aragto, Bluetooth sidoo kale waa la heli karaa. Waxaad isticmaali karaan "Daar Bluetooth".
Tallaabooyinka kor ku xusan waxaa loogu tala galay sida aad u dhigay aad iPhone sida colaadeed. Ka dib markaas, waa in aad ku xidhi aad aaladaha kale ee kombiyuutarada ama aad kulkulul iPhone.
Si aad u xirmaan isticmaalaya Wi-Fi: Dooro "iPhone" ka-Wi Fi your computer ama qalab ayaa la ogaado> qortaa erayga sirta ah (waxaad arki kartaa sirta ah ee aad iPhone ugu horeeya ee meesha goobaha)
Si aad u xirmaan isticmaalaya Bluetooth, labada ciyaaryahan aad iPhone la your computer ama qalab. Fadlan hubi in Bluetooth ku on your computer ama qalab la karti> On aad iPhone, ka jaftaa Labo Xidig ama geli furaha soo bandhigay on your computer.
Si aad u xirmaan isticmaalaya USB: koronto iPhone galay computer via cable USB ah aad> ka mid ah liiska adeegyada network in goobaha aad Dooro iPhone.
Waa fal fudud si aad u hesho iPhone qotomiyey sidii magaalo colaadeed, iyadoo aan loo eegin in aad isticmaasho Bluetooth, Wi-Fi ama USB. Sidaas inta aad leedahay xadhig USB ah, waxaad awoodi doontaa in ay ku xidhmaan aad iPhone la your computer iyo isticmaali USB ugu horeeya ee ah, oo aad leedahay in la xasuusto in ay dhex maraan ugu horeeya ee qofka, inta badan, si ay u dhigay aad iPhone sida.
Bixin: sida aad u heli halakeeyeen ee iphone? Waxa ay u muuqataa waa la waayay oo kaliya.
Waxaa jira waqtiyo ay goob Personal kulkulul baaba'aa ka Settings. Dabcan, tani waa dhibaato, laakiin waxaa jira siyaabo in this dhibta,
Tallaabada 1. Settings Open> General.
Tallaabada 2. Tubada celi Settings Network oo sug Your iPhone in Guuleysatey. Tani waxay kuu ogolaanaysaa in aad iPhone in ay dib si wax cayayaanka oo laga yaabo in niman ka maqnaan doona nidaamka.
Tani waa inay u ogolaato Personal colaaduhu saameeyeen in uu soo laabto in Settings aad. Haddii aan samayn, in kastoo, waxa kale oo aad is bedeli karto magaca iPhone. Settings Open> General> About> Name . Tani waa inay kaa caawiyaan in aad dib u hesho goobaha Personal kulkulul ilaa aad iPhone.
Sida loo Download iyo rakib Apple macruufka 9 beta aad iPhone ama iPad
> Resource > iPhone > Sida loo Setup iPhone ugu horeeya iyo Raadi Disappered ugu horeeya ee ku iPhone